I-DA ngeke imthathele zinyathelo uZille ngezinsolo ‘zokucwasa’ | News24
I-DA ngeke imthathele zinyathelo uZille ngezinsolo ‘zokucwasa’
Cape Town – IDemocratic Alliance (DA) ithi angeke ize imthathele izinyathelo uNdunankulu waseWestern Cape, uHelen Zille, kulandela ukusuka komsindo ngokuphawula kwakhe akwenze enkundleni yezokuxhuama, iTwitter, kubika iThe HuffingtonPost.
UZille ubephawula mayelana nesenzo esisuse imvunge esenziwa ngomunye woweta wendawo yokudla, iBungalow, nowabhala epheshaneni olithola uma uthengile (till slip) ukuthi “2 blacks” nokusho ukuthi ababili abamnyama.
Kwabe sekusuka omkhulu umsindo ngemuva kokushicilelwa kwaleli pheshana ezinkundleni zokuxhumana njengoba abanye bachaza lesi senzo njengesokucwasa ngokwebala.
OLUNYE UDABA: UHelen Zille yinkunzimalanga yomcwasi – ANC
Kuthe kusenjalo uZille naye wangenelela kule nkulumompikiswano nalapho abuza khona kuTwitter ukuthi; “kungani kulungile ukuhlukanisa abantu ngokobuhlanga emisebenzini kodwa bangahlonzwa abantu ngokobuhlanga etafuleni?”
Lo weta, ongowokudabuka eZimbabwe, wamiswa emsebenzini ngesikhathi kuqhubeka uphenyo ngalesi sigameko kanti wabuye waxolisa, wathi uyazisola ngesenzo sakhe.
UZille usethole okukhulu ukugxekwa ezinkundleni zokuxhumana ngalokhu kuphawula kwakhe njengoba kunalabo abakholwa ukuthi ukuphawula kwakhe kweseka ukucwasa ngokwebala.
I-ANC eWestern Cape isinxuse i-DA ukuba ixoshe ngokushesha uZille njengoNdunankulu wesifundazwe ngaphambi kokuba enze umonakalo omkhulu.
Kodwa-ke uSihlalo weDA, uJames Selfe, uye wamsekela uZille wathi futhi leli qembu ngeke lize limthathele zinyathelo ngokuphawula akwenzile.
“Ngicabanga ukuthi lokhu akuwunyatheli umgomo wethu noma yingayiphi indlela futhi nakanjani asinazo izinhloso zokumthathela noma ngabe yiziphi izinyathelo ,” kusho uSelfe.